I-marine manga: iyini, yakhiwa kanjani nemiphumela yayo | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Lapho sikhuluma ngeziphepho, uhlobo lwesimo sezulu esibi kakhulu esinamandla amakhulu okubhubhisa luhlala luza engqondweni. Enye yezinto zayo ezahlukahlukene yi umkhono wasolwandle. Kuyaziwa nangegama le-waterpout. Kuyisimo sezulu sezulu esibonakala ngokubonakalayo futhi sifana nenqwaba yamafu amise okofele futhi ajikeleza ngokushesha. Sinjengesiphepho esivamile kepha senzeka ebusweni bolwandle.
Kulesi sihloko sizokutshela ukuthi umkhono wasolwandle uyini, ukhiqizwa kanjani nokuthi unamiphi imiphumela.
1 Uyini umkhono wasolwandle
2 Wakhiwa kanjani umkhono wasolwandle
Uyini umkhono wasolwandle
Uma kunokungazinzi okukhulu kwesimo sezulu kanye nenkanyamba kwenzeka olwandle, sinalokho okwaziwa ngokuthi umkhono wasolwandle. Futhi ukuthi kuyisimo sasemkhathini esingakhonjwa njengenqwaba yamafu anomumo wefeleni futhi ajikeleza ngokushesha. Lo mkhuba wehla usuka ku i-cumulus cloud base ebusweni bolwandle futhi kubangela ukuphakama kwayo kuphakame okuthile. Ngalesi sizathu, ibizwa ngokuthi umkhono wasolwandle noma i-waterpout.
Ngokwencazelo sikhuluma ngesiphepho kuleso simo sezulu esenzeka phansi futhi esidala imiphumela emibi endaweni esidlula kuyo. Kulokhu, lapho udlula ngaphezulu kolwandle igama liguqulwa libe manga lasolwandle. Umkhono wasolwandle nawo ungaphenduka isiphepho esivamile uma ugcina ushaye phansi. Imvamisa lapho lokhu kwenzeka isiphepho siphelelwa ngamandla kakhulu sigcine ngokunyamalala. Uma sihlaziya imikhono yasolwandle ngokuya ngemiphumela emibi engaba nayo kuzimpahla ezibonakalayo noma kubantu, kufanele sazi ukuthi isimo sayo sincane kakhulu.
Ngokungafani neziphepho ezivamile, imikhono yasolwandle ivela olwandle. Lokhu kwenza ingozi engaba khona yomonakalo ibe phansi kakhulu. Kungathinta eminye imikhumbi ehamba olwandle noma yemikhumbi yokudoba. ESpain sivame ukuthola lolu hlobo lwe Izimo zezulu ezimbi kakhulu ezindaweni zaseCatalonia, umphakathi waseValencian, iziQhingi zeBalearic, amaCanaries nasezindaweni ezisempumalanga yoLwandle iCantabrian. Yize ubudlova balezi zimo bungaphakeme kakhulu, kwanele ukuba yingozi enkulu kuzo zombili izikebhe zokudoba nezokungcebeleka.
Wakhiwa kanjani umkhono wasolwandle
Kunezifundo eziningi eziphenye ukuthi umkhono wasolwandle ukhula kanjani. Iziphetho zezifundo ziveze ukuthi lezi zimo zezulu zenziwa ngezigaba ezinhlanu ezihlukene. Sizohlaziya izigaba ngasinye nemvelaphi yomkhono wasolwandle:
Isigaba 1: indawo emnyama. Ngalesi sigaba uhlobo lwamafomu wediski amnyama acishe abe mnyama ebusweni bamanzi. Iqiniso lokuthi leli banga lingaba khona lisho ukuthi kukhona ikholomu yomoya endaweni efanayo. Ngalesi sigaba, ifu elincane elimise okwefaneli lingaba noma lingabi khona.
Isigaba 2: ukuvunguza. Ngalesi sigaba, amabhande okuvunguza akha indawo emnyama eshiwo ngenhla. Lawa mabhande ayashintshana phakathi kwemibala ekhanyayo nemnyama.
Isigaba 3: indandatho yegwebu. Endaweni emnyama ekuqaleni ekuqaleni uhlobo lwesishingishane segwebu sizoqala ukwakheka emanzini aphakanyiswa ngumoya. Ngesikhathi esifanayo lapho lokhu kwenzeka noma ukuthuthukiswa okuqondile kwefu le-funnel elaziwa ngegama le-tuba kuqala.
Isigaba 4: ukuvuthwa. Iringi eyenziwe nge-foam ne-tuba ifinyelela ukuphakama nobude obukhulu ngobubanzi obukhulu. Kulapha lapho sibona khona isimo sezulu ngokukhazimula okukhulu.
Isigaba 5: ukushabalalisa. Lesi sigaba imvamisa senzeka kaningi ngokungazelelwe. Lokhu kungenxa yokuthi eyodwa noma ngaphezulu yezimo ezigcina imikhono yasolwandle isebenza isebenza. Izikhathi eziningi kwenzeka ukuthi imvula eseduze nalesi simo sesimo sezulu engaphelele ithe umkhono wasolwandle futhi ibangele imisinga ebandayo eyehlayo ukuqalisa ukuchithwa kwento. Olunye uhlobo lokuhlakazeka ukuthi umkhono wasolwandle ungena emhlabeni futhi ngenxa yamandla okuxubana nokushintsha kobuningi kugcina kubuthaka kuze kube yilapho kunyamalala.
Singasho ukuthi awukho umkhono wasolwandle ofana ncamashi nomunye. Kuyiqiniso ukuthi ingahlukaniswa ngokuya ngomsebenzi omkhulu noma omncane womuntu ngamunye. Ngale ndlela, bahlukaniswa njenge- imikhono yasolwandle enenkanyamba kanye nemikhono yasolwandle engadabuki. Ngayinye yezinhlobo ezimbili zemikhono yasolwandle inezici zayo eziyinhloko. Sizohlaziya ngasinye sazo.
Umkhono wasolwandle onenkanyamba yilokho okwenzeka lapho inqubo yokwakheka kucatshangwa ukuthi ifana naleyo yenkanyamba yakudala. Umehluko kuphela ukuthi umcimbi wenzeka olwandle uluhlaza ebusweni bomhlaba. Kunezifundo ezithile lapho kwenziwa khona umzamo wokufaka igama elithi tornadic ngokuhambisana nesiphepho ngoba akucaci ngokuphelele ukuthi indlela yokwakheka kwalesi simo semvelo idinga ukuba khona kwe-vortex enamandla amakhulu njengoba kwenzeka esimweni se izivunguvungu ezivamile.
Ngakolunye uhlangothi, sinemikhono yasolwandle engadabuki. Lolu hlobo lwemikhono yasolwandle luvame kakhulu emaphethelweni eNhlonhlo yase-Iberia. Indlela yokwakheka kwayo ihlotshaniswa nenhlanganisela yesheya yomoya evundlile eyenzeka olwandle.. Lesi shear enezingqimba ixubene namazinga okushisa aphezulu obuso bolwandle akhiqiza lezi zimo ezithanda ukuba khona komkhono wasolwandle. Emaphethelweni ethu kunenani elikhulu lemisebe yelanga edala ukuthi ulwandle lushise ngokushesha ngokuhamba kwesikhathi. Ukujwayela ulwandle kwenzeka kancane ngokwengeziwe ngenxa yale radiation emikhulu yelanga. Ngalesi sizathu, imikhono yasolwandle yenzeka kaningi kakhulu ezingxenyeni zethu.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngesimo sezulu semikhono yasolwandle.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Umkhono wasolwandle
Amaqoqo ezinkanyezi ayisiyingi